မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း ( ၆ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း ( ၆ )
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း ( ၆ )
Posted by aye.kk on Jun 19, 2012 in My Dear Diary | 12 comments
စ နေ နေ့ မ နက် ပိုင်း ၊ ကိုး နာ ရီ လောက် မှာ ၊ ကျ မ နေ ထိုင် သည့် နေ ရာ သို့ ၊ ဦး တ ယောက် ရောက် ချ လာ ပါ သည် ။
ဒီ နေ့တော့ ထ မင်း လိုက် ကျွေး မည် ဟု ပြော ပြီး ၊ သ္မီး အား ပြော ထား သည့် ကိ စ္စ က ဦး မ ပြန် ခင် သိ ချင် သည် ဟု ကျ မ အား ဆို ပါ သည် ။
ကောင် လေး နှင့် သိ ခွင့် ရ ချင် သည် ….
စ ကား ပြော ဆို ချင် သည်…..
သ င်္ဘော တက် မည့် နောက် ဆုံး ရက် မ တိုင် ခင် တွေ့ ချင် သည် ဟု ပြော ပြီး ၊ ဒီ နေ့တော့ သ္မီး ကို နေ ရာ စုံ လိုက် ပို့မည် ။ အ ခြား ဘာ ကိ စ္စ မှ ခေါင်း ထဲ မှာ မ တွေး ပဲ ၊ အေး ဆေး လည် မည် ဟု ပြော ပါ သည် ။ ကား ဖြင့် ဦး က လာ ခေါ် ပါ သည် ။ ကန် တော် ကြီး က ရ ၀ိတ် ဟို တယ် မှာ သ္မီး ငယ် ငယ် က ကြိုက် သည့် ရေ ခဲ မုန့် ၊ ဟန် ဘာ ဂါ ၊ မော နင်း စာ အ နေ ဖြင့် (break fast) ကျွေး မည် ။ နေ့ခင်း တ နာ ရီ လောက် တွင် ကန် တော် ကြီး ဟို တယ် မှာ နေ့လည် စာ သုံး ဆောင် ကြ မည် ပြော ပါ သည် ။ ပြန် လာ လျှင် ရွှေ တိ ဂုံ ၊ ဆူး လေ ဘု ရား ပို့ ပေး မည်။ သ္မီး နေ ထိုင် သည့် နေ ရာ သို့ ပြန် ပို့ ပေး မည် ဟု ဦး က ပြော ပါ တော့ သည် ။
မ နက် အိပ် ရာ က နိုး နိုး ခြင်း အ စီ စဉ် ဆွဲ ထား ပြီး သား ၊ အ စီ စဉ် ကို ည ထဲ က ပင် စဉ်း စား ထား သည် သ္မီး နှင့် တွေ့ချင် သည့် ဆန္ဒ ပြင်း ပြ လွန်း သ ဖြင့် ၊ အိပ် ၍ ပင် မ ပျော် ။ အ ခြား စိတ် ညစ် စ ရာ ကိ စ္စတွေ ကို ခေါင်း ထဲ မ ထည့် ထား ပဲ ၊ သ္မီး ကို ငယ် ငယ် က လို မျိုး ပေါ့ ပေါ့ ပါး ပါး လေး လိုက် ပို့ ပေး ချင် သည် ။
ဦး ရင် ထဲ က ဆန္ဒ အ မှန် သာ ဖြစ် သည် ။ သ္မီး လည်း ငြင်း ဆန် ၍ ဆင် ခြေ ပေး စ ရာ မ လို အ ရံ သင့် လိုက် ခဲ့ ယုံ သာ ဖြစ် သည် ဟု ပြော ဆို လျှင် ၊ ကျ မ မှ မ ငြင်း သာ တော့ ပါ ၊ ဦး နှင့် လိုက် လာ ခဲ့ မိ ပါ သည်။
အစ် မ ကြီး ကျယ် တုံး က ဆင် ခြေ ဆင် လက် အ မျိုး မျိုး ပေး ခါ ၊ အ ကြောင်း အ မျိုး မျိုး ပြ ငြင်း ဆန် မှာ ကို ၊ ဦး က စဉ်း စား ထား မိ ဟန် တူ ပါ သည် ။
ဦး ၏ စေ တ နာ ကို ၊ သ္မီး လက် မ ခံ နိုင် စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ ပါ ဟု ပြော ပါ သည် ။
ကျ မ က လည်း ….
သြော် …ဦး က တတ် လည်း တတ် နိုင် ပါ ပေ့ ၊ လာ ခေါ် လျှင် မ လိုက် ရန် ငြင်း ဆန် ဖို့အ တွက် သ္မီး က လည်း ည ထဲ က စဉ်း စား ထား ပါ တယ် ။ ဥာဏ် နီ ဥာဏ် နက် သုံး ရ တော့ မှာ လေ , ဒါ ကို ဦး က သိ နေ ပြီး သား ဖြစ် နေ တာ အံ့ ရော ၊ ဦး က မ လိုက် ချင် တဲ့ သူ ကို လိုက် ချင် အောင် ချည် ပြီး တုတ် ပီး လာ ခေါ် တော့ တာ ပေါ့ နော် ။
ဦး က တ ကယ် မုံး စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး ဟု ဆို ခါ ပြော မိ လျှင် ၊ ဦး က ကဲ အ ခု ဦး သ ဘော ထား က ရိုး ရိုး ရှင်း ရှင်း လေး ပဲ ၊ သ္မီး မ လိုက် ချင် ယင် ၊ ကား ပြန် ကွေ့ပြီး သ္မီး နေ တဲ့ နေ ရာ ဆီ ပြန် မောင်း ပို့ ပေး မည် တ ကယ် ဟု ဦး က ပြော ပါ တော့ သည် ။
ဦး က တ ကယ် ဆို လည်း ၊ အ ခု ပဲ ပြန် ပို့ ဟု ပြော မိ လျှင် …..
ဦး က မျက် စိ မျက် နှာ ပျက် ခါ ၊ မျက် နှာ ကြီး နီ ရဲ တက် သွား ပါ သည် ။ ကား စ တီ ယာ ရင် ကို ချိုး ကွေ့လျှက် ပြန် မောင်း လာ ပြီး ၊ ဆယ့် ငါး မိ နစ် ခန့် လောက် ကြာ အောင် ၊ တ လမ်း ၀င် တ လမ်း ထွက် မောင်း ပြီး မှ ၊ လူ ပြတ် သည့် လမ်း ကြား တစ် နေ ရာ တွင် ထိုး မောင်း ပြီး ဘ ရိတ် အုပ် ခါ ရပ် လိုက် ပါ သည် ။ ဦး က ပြန် ပို့မယ် ပြော ပြီး ၊ “ဘာ လုပ် တာ လည်း ဟင်” …….၊ ဟု အ လန့်တ ကြား ပြော ဆို မိ ပါ သည် ။
ကျ မ အ နေ ဖြင့် လမ်း ကြား တခု ဆို တာ ပဲ သိ သည် ။ ဘယ် နေ ရာ မှန်း မ သိ သ ဖြင့် ကြောက် စိတ် ပို လျှက် ၊ ဒေါ သ ထွက် ခါ အ သား များ တုန် လာ ပြီး ငို ချ မိ ပါ သည် ။ ဦး က အ တန် ကြာ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် လျှက် က ၊ ဦး ကို သ္မီး က မ ယုံ ကြည် တာ လား ဦး ဒေါ သ အ ရမ်း ထွက် နေ မိ လို့စိတ် ငြိမ် အောင် ထိန်း ပြီး ခ ဏ နေ ချင် လို့ လမ်း ကြား ရှင်း တဲ့ နေ ရာ ရှာ ပြီး လိုက် မောင်း နေ မိ တာ ဟု ပြော ဆို ပါ သည် ။ သ္မီး ကို လက် ဖျား နဲ့့ပင် မ ထိ ဟု ပြော ပါ သည် ။
ဦး က ကား စ တီ ယာ ရင် ပေါ် လက် တင် ပြီး ခေါင်း အပ် ခါ ခ ဏ ငြိမ် သက် စွာ နေ ပြီး ၊ သ္မီး ပြော တဲ့စ ကား က ဘယ် အ ဓိ ပ္ပါယ် သက် ရောက် နေ ပြီ လည်း ဦး ရဲ့ ဂုဏ် သိ က္ခာ တွေ ထည့် မ စဉ်း စား တော့ ဘူး လား ဟု ဆို ပါ သည်။ ဦး စေ တ နာ ကို ဝေ ဒ နာ ဖြစ် အောင် သ္မီး လုပ် တယ် ဟု ဆို ပါ သည် ။
ပြီး လျှင် ဦး က သူ ၏ စိတ် အား ပြေ လျှော့ ထား လျှက် က ၊ သ္မီး အ ခု နေ တဲ့ နေ ရာ ကို ပြန် မှာ လား ဟု ပြော လျှင် ၊ ကျ မ မှ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် ပြီး မောင်း ချင် တဲ့ နေ ရာ မောင်း ပါ ဟု ပြော မိ ပါ သည် ။
စ ကား နှစ် ခွ နဲ့မြွေ ဟောက် မ လေး လုပ် ဦး မ လို့ လား ဟု ပြော ပါ သည် ။ အိမ် ပြန် မှာ လား ဦး ပို့ မယ့် နေ ရာ ကို သွား မှာ လား ကြိုက် တာ ကို ရွေး ဟု ပြော ပါ သည် ။ ကျ မ မှ မ ရွေး တော့ ဘူး ဟု ပြော လိုက် မှ ပင် ဦး ၏ မျက် နှာ က ပြန် လန်း လာ ခါ ၊ က ရ ၀ိတ် ဟို တယ် ဖက် သို့ မောင်း ပို့ ပါ သည် ။
စိတ် အ နှောက် အ ယှက် ဖြစ် သွား ခဲ့ ကြ ရ သ ဖြင့် ၊ တ လမ်း လုံး ငြိ်မ် သက် တိတ် ဆိပ် စွာ ဖြင့် စ ကား မ ပြော ကြ ပဲ က ရ ၀ိတ် ဟို တယ် သို့ ရောက် လာ ခဲ့ ကြ ပါ သည် ။ ဦး က ဟန် ဘာ ဂါ အား ဆိတ် သား ညှပ် ဖြင့် စား မှာ လား ဟု မေး ပါ သည် ။
“အင်း ”ဟု ပြော ပါ သည် ။ ဦး က တော့ မြန် မာ ဘီ ယာ သောက် ချင် သည် ဟု ဆို ခါ ၊ အာ လူး အ ချောင်း ကြော် တစ် ပွဲ နှင့် ဘီ ယာ မှာ ယူ ပြီး ၊ ဘီ ယာ ကို တ ငုံ ချင်း သောက် နေ ပါ သည် ။ ကျ မ အား စေ့ စေ့ ကြည့် ယင်း ၊ စ ကား မ ပြော ပဲ တေ မိ လုပ် နေ ဦး မှာ လား ဟု လည်း ပြော ပါ သည် ။
ထို အ ခါ မှ သာ……..
ကျ မ က ဦး က ဘာ လို့ ဘီ ယာ သောက် နေ တာ လည်း ဟု ၊ ကျ မ မှ စ ကား ဆို မိ ပါ သည် ။
စင်္ကာ ပူ မှာ မြန် မာ ဘီ ယာ သောက် ချင် ရင် ဈေး ကြီး ပေး သောက် ရ တယ် ။ က ရ ၀ိတ် မှာ သောက် ရ တာ ဈေး သက် သာ သည် ။ ဘီ ယာ က ဆီး ကောင်း သည် ၊ မူး မှ မ မူး တာ ဟု ပြော ပါ သည် ။ နိုင် ငံ ခြား က မိန်း ခ လေး များ ဆို လျှင် ဘီ ယာ ကို ရေ လို ပဲ သောက် ကြ သည် ဟု ဆို ပါ သည် ။ သ္မီး သောက် ကြည့် ပါ လား ဟု ပြော ပါ သည် ။ သူ ရာ ရေ ကို တော့ လျှာ ဖျား နှင့် ပင် မ တင် ပါ ဟု ဦး ကို ပြော မိ ပါ သည် ။
ခ ဏ ကြာ တော့ ရေ ခဲ မုန့်မှာ ယူ ကာ ဦး က ကျွေး ပါ သည် ။ ငယ် ငယ် က တော့ ဒီ မှာ လာ ကျွေး ရင် ဗိုက် မ ၀ မ ချင်း စား နိုင် သည် ။ ခု ရော ဟု ပြော လျှင် ,
အ ယင် လို ခ လေး မှ မ ဟုတ် တာ …..
မ စား တော့ ပါ ဘူး ဟု ပြန် ပြော မိ ပါ သည် ။
မော နင်း စာ က ၊ နေ့လည် စာ နှင့် အ ရမ်း ကပ် သွား ပြီ ကန် တော် ကြီး ဟော် တယ် ဖက် သွား ယင်း ၊ အေး ဆေး ထ မင်း မှာ စား ကြ မည် ။ တ ရုတ် အ စား စာ မှာ စား လား ၊ ဘာ မှာ စား မ လည်း ၊ ကြိုက် တာ ပြော
စဉ်း စား ထား ဟု ၊ ဦး က အ ရင် မေး ထား ပါ သည် ။
ဟို ရောက် မှ စဉ်း စား ရင် အ ချိန် ကုန် တယ် ၊ မှာ ရ တာ တ အား ကြာ မြင့် သည် ။ ရှူ ခင်း ကောင်း သ ဖြင့် နိုင် ငံ ခြား သား များ လာ စား ကြ တာ များ တယ် ဟု ဦး က ပြော ပြ ပါ သည် ။ က ရ ၀ိတ် ဟို တယ် မှာ ဦး က သူ့မိတ် ဆွေ များ နှင့် ဆုံ ရာ တွင် ကျ မ အား ဘာ တော် သ လည်း ဟု ဦး ၏ မိတ် ဆွေ များ က (အ င်္ဂ လိတ် လို စ ကား ညှပ် ) ခါ မေး မြန်း ကြ ပါ သည် ။ ဦး က ကိုယ် နှင့် မ ညား ဖြစ် သည့် ခယ် မ လောင်း လေး ဟု (အ င်္ဂ လိပ် လို စ ကား ညှပ်) ပြီး ပြန် ပြော ပါ သည် ။
ဦး ဘာ လို့အဲ ဒီ လို ပြော ရ တာ လည်း ၊ ရှက် စ ရာ ကြီး ဟု ပြော လျှင် အစ် မ ကြီး ကျယ် ကိ စ္စ က ဦး ရဲ့ဘော် ဒါ ရင်း တွေ မှန် သ မျှ အား လုံး သိ ကြ သည် ၊ ညာ ၍ မ ရ ဟု ပြော ပါသည် ။ ဒီ မှာ မ ထိုင် ချင် တော့ ဘူး ဟု ပြော လျှင် ၊ ဦး က………ဘယ် သွား သွား လွတ် မှာ မ ဟု တ် ဘူး ၊ ကန် တော် ကြီး ဟို တယ် မှာ လည်း ဦး ရဲ့ဆွေ မျိုး တွေ နဲ့ကင်း လို့ လွတ် နိုင် မှာ မ ဟု တ် ဘူး ဟု ဆို ပါ သည် ။
အ ပြင် မှာ ထိုင် ယင်း မှာ စား ကြ မယ် ၊ သ္မီး ကို တော့ မြင် ရင် လည်း မှတ် မိ နိုင် မှာ မှ မ ဟုတ် တာ ဟု ဆို ပါ သည် ။ ဘယ် သွား သွား မ လွတ် မယ့် အ တူ တူ ရွေး စ ရာ လမ်း မှ မ ရှိ တာ ၊ ဦး ရဲ့ ဆွေ မျိုး တွေ က လည်း ၊ ရန် ကုန် တ မြို့လုံး ပဲ လား ဟု ကျ မ မှ ပြော မိ ပါ တော့ သည် ။
ဒါ တောင် ဦး က ကျ မ ကို လက် ထပ် ချင် သေး တယ် ။ ဦး ဆွေ မျိုး တွေ က ဘာ ပြော ကြ မ လည်း သေ သေ ချာ ချာ စဉ်း စား ကြည့် ပါ ဦး ဟု မေး ခွန်း ထုတ် မိ ပါ တော့ သည် ။
ဖြစ် နိုင် ပါ့ ဦး မ လား အ ဖေ က စီး ပွား ရေး မှ မ လုပ် နိုင် တော့ တာ ၊ အ ခြေ အ နေ က အ ရမ်း ကွာ ဟ သွား ပြီ တူ မှ မ တူ နိုင် တော့ တာ ။ ဘယ် နည်း နဲ့ မှ မ ဖြစ် နိုင် တာ ၊ ဦး နဲ့ လက် ထပ် ဖို့ ဆို တာ က လည်း
က မ္ဘာ အ ဝေး ကြီး ပဲ ဟု ပြော မိ လိုက် ပါ သည်။
ကျ မ အ နေ နဲ့ က….
ဦး ကို သံ ယော ဇဉ် ဖြစ် မိ တာ မ ငြင်း ပါ ဘူး…..။
ဦး ကို လွမ်း မိ တာ လည်း ညာ စ ရာ မ လို ပါ ဘူး….။
လက် ထပ် ဖို့ဆို တာ က တော့ မ ဖြစ် နိုင် ပါ ဘူး……။
ဦး ရယ် ဟု ကျ မ က ဆို မိ ခဲ့ ပါ သည် ။
ထို စ ကား အား ကြား ရ လျှင် ၊ မ ဖြစ် နိုင် တာ က ဦး မ ဟုတ် ဘူး ၊ သ္မီး က သာ ဗြောင်း ပြန် ပြော နေ တာ ..
သ္မီး မိ ဘ တွေ ဘယ် လောက် ချမ်း သာ ခဲ့ သ လည်း ၊ ဆို တာ ကို ဦး က မ သိ ခဲ့ တာ မှ ၊ မ ဟုတ် တာ ပဲ
ဟု ပြော ပါ သည် ။။
ကျုပ်သာ ဦးနေရာ ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ ကားပေါ်တက်ကတဲက ပြန်ပို့ ဖို့ စဉ်းစားမိမှာကို မဟုတ်ဘူး ။
ဒါကြောင့် မင်း ကားပေါ် မှာ ဘယ်သူမှ တက်မလိုက် ရဲကြတာကိုး။
ဘယ်သူ တက်တက် ခိုးပြေး မဲ့ ပုံ။
ကလေး မုန့်ပေးကြိုက် လို့ပြောရမလား။
အစ်မကို လဲ အသေကြိုက် ပြီးတော့ ညီမ ကိုလဲ အတင်းကပ်။
ငယ်သံယောဇဉ် ဆိုလဲ ဒီကလေးလေးကို ဖြူဖြူစင်စင် လေး ဘဲ အရိပ်ကြည့် ချစ်နေသင့်သလား။
အဆုံးမှာတော့ ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်နေမှာ သိနေသလိုဘဲ။
မိန်ကလေးရဲ့ စိတ်လေးကို ဦးရဲ့ကိုင်သွယ်ပုံကတော့ လှတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
မိန်းကလေးကလဲ ခံစားမှုနဲ့ အသိ လွန်ဆွဲနေသလိုပဲ။
အဲဒီ့ဦးဆိုဓါ ဦးကြောင်ကြီးပဲကွ…ဗူး..ထွားထွား…ထွားထွား…ကြေးမုံဂျီးကို ကားတင်ပြေးမယ်…။ ကပေရေ ကန်တော်ကြီးစောင်းက တင့်ကားထဲ ဓါတ်ဆီသွားထည့်ထားကွာ..မနက်စောစော ပန်းခြံစောင့် ငိုက်နေတုန်း အဲဒီတင့်ကားနဲ့ ကြေးမုံဂျီးကိုသွားခေါ်မယ်။ ကားတင်ပီးရင် အောင်ပွဲခံအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လမ်းမှာတွေ့တဲ့ တရုတ်သံရုံးကို အမြောက်နဲ့ပစ်မယ်။။ နို့မို့ရင် ဒင်းတို့လိုက်လာနေအုံးမယ်…။
အလာကောင်းပေမယ့် အခါနှောင်းသွားဘီ ကိုကိုကြောင်…
အဲ့ တင့်ကား က နှစ်၃၀ ကျော်သွားလို့ ဒို့ဘဂျီး စိန် ကျို ပလိုက်ပီ…
ကြောင်ကြီးနဲ့ ကြေးမုံလေး ကြားထဲမှာ မောင်ပေ လူဆိုးဖြစ်ရပါကောလား
အန်တီအေးရေ .. သမီးတော့ ဒီဝတ္တုကို ဖတ်ရင်း အသည်းယားလာပြီ … ။
ကောင်မလေးက ရယ်ဒီမိတ်ဘဲကြီးကို သံယောဇဉ်ဖြစ်နေရဲ့သားနဲ့ .. လက်မထပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပြန်တယ် …။ အရင်ခေတ်က အသက် ဆယ့်သုံးနှစ်လောက် ကွာတဲ့အထိ ပေးစားလို့ ယူကြတာတွေလည်း တွေ့ဖူးတော့ အသက်ကြီးသူကို ယူတာ … အဲ့ခေတ်နဲ့ ဆို ပြသနာ မရှိလောက်ပါဘူး .. လူသိပ်ပြောခံရမှာ မဟုတ်လောက်ဘူး …။
ဟိုလူကြီးကလည်း … ယောကျာ်းမာယာနဲ့ နွဲ့ တယ် … ။ မြွေပါလည်း ဆုံး ၊ သားလည်းဆုံးဖြစ်မှာ စိုးလို့ …. မူယာမာယာများပြီး … သိက္ခာတွေဘာတွေရှိယောင်ဆောင်တယ် …. ။ တကယ်တမ်းသာ သူ့မှာ သိက္ခာနဲ့ မာနရှိလျှင် .. ကိုယ့်ကို ငြင်းလိုက်တဲ့ သူရဲ့ ညီမကို ဘယ်လိုမှ ချိန်ရွယ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး … ။ အစ်မလိုလို ညီမလိုလိုနဲ့ တားဂတ်ပြောင်းလိုက်ကတည်းက … သူ့မှာ မာနရော ၊ သိက္ခာရော ပွန်းပဲ့သွားပြီလို့ ထင်မိပါတယ် … ။
(အန်တီရေ … ၀တ္တုထဲက ဇာတ်ကောင်ကို စာဖတ်သူ အမြင်နဲ့ ဝေဖန်ကြည့်တာပါနော် … အမှားပါက ခွင့်လွှတ်ပါ )
အဲ ဦးရဲ့ မြှားကတည့်တည့်ကို ချိန်နေပါရောလားနော် ……….
အခုတော့ ကရ၀ိတ်က ရေခဲမုန့် ရသေးလားတောင် မသိတော့ဘူး။
ငယ်ငယ်ကတော့ ရေခဲမုန့် စားချင်ရင် အဲဒီ ကို သွားစားရတယ်။
အဲဒီ ခေတ်တုန်းကတော့ လေးဘီးတောင် ရှိပါ့အုန်းမလား။
ပြည်သူ့မုန့်တိုက် တို့ ဘာတို့ ဆိုတာ နာမည်သာ ကြားဖူးတာ တခါမှ မရောက်ဘူးခဲ့သလိုပဲ..
အခု Ruby Mart ရှိတဲ့ နေရာ ထင်တယ်။